Banijya News | नेपालमा ८१ लाख डोज खोप भित्रियो, कतिले लगाए खोप ? - Banijya News नेपालमा ८१ लाख डोज खोप भित्रियो, कतिले लगाए खोप ? - Banijya News
नेपालमा हालसम्म ८१ लाख ८२ हजार ८ सय ५० डोज खोप भित्रिएको छ । कोभिसिल्ड, भेरो सेल र जोन्सन एण्ड जोन्सन गरी उक्त डोज खोप नेपाल भित्रिएको हो । हालसम्म २४ लाख ४८ हजार डोज कोभिसिल्ड खोप भित्रिएको छ । जसमध्ये ११ लाख भारतबाट अनुदान प्राप्त, १० लाख भारतबाट खरिद र ३ लाख ४८ हजार डोज कोभ्याक्स सुविधामार्फत उपलब्ध भएको हो । यस्तै नेपालमा हालसम्म ४२ लाख डोज भेरो सेल खोप भित्रिएको छ । जसमध्ये १८ लाख चीन सरकारबाट अनुदान प्राप्त र २४ लाख डोज खोप खरिद गरिएको हो ।
यस्तै नेपालमा हालसम्म जोन्सन एण्ड जोन्सनको १५ लाख ३४ हजार ८ सय ५० डोज खोप भित्रिएको छ । यो सबै कोभ्याक्स सुविधाबाट अमेरिकी सरकारले अनुदान दिएको हो । नेपालमा २२ लाख ८८ हजार ७९२ डोज कोभिसिल्ड खोप लगाइसकिएको छ । यीमध्ये १८ लाख २८ हजार ४८४ जनाले एक डोज र ४ लाख ६० हजार ३०८ जनाले दुवै डोज लगाएका छन् । नेपालमा २२ लाख ४९ हजार १०९ डोज भेरोसेल खोप लगाइसकिएको छ । यीमध्ये १५ लाख ५४ हजार ५५४ जनाले एक डोज र ६ लाख ९४ हजार ५५५ जनाले दुवै डोज लगाएका छन् ।
यस्तै नेपालमा २ लाख ४३ हजार ३१५ जनाले जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप लगाएका छन् । यो खोपको एकै मात्रा लगाएक पुग्छ । तीन वटै गरी नेपालमा हालसम्म ४७ लाख ८१ हजार २१६ डोज खोप सञ्चालनमा आएको छ । बाँकी ३४ लाखमध्ये केही खोप खेर जाने हुँदा बाँकी खोप स्थानीय तहमै रहेको स्वास्थ्य सेवा विभाग खोप महाशाखाका प्रमुख डा.झलक शर्मा गौतमले बताएका छन् ।